मार्टिन भिजल्याण्डले नियन्त्रणमा लिएको छ? होइन: यहाँ पढ्नुहोस् किन यो कुरा होइन! मार्टिन भिजल्याण्ड
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	8 मई 2019 मा	•2टिप्पणिहरु
गीनेस्जिल्जको डिप्टी सम्पादक बार्ट निजमनले कल ट्विटरमा ब्लडडे प्राप्त गरे। कारण? उहाँले यूरोोसापिकिक मतदानको लागी बोलाउनुभयो। उनले भने कि त्यो सामान्यतया घरमै सधैँ हुन्छ। बेशक बेशक, किनभने जेनेस्टिजले कहिल्यै मतदान गर्न को लागी कहिल्यै बोलाइएन। हामी यहाँ एकै कुरा यहाँ संयुक्त रूपमा अमेरिकामा नियन्त्रण विपक्षी वेबसाइटहरूको अवरोधको साथ यहाँ भइरहेको देख्न सक्छौं Infowars.com फेसबुकमा पछिल्लो हप्तामा। आउनुहोस् कि कसरी काम गर्दछ।
नियन्त्रण नियन्त्रणको खेलको माध्यमबाट हेर्न गाह्रो छ, किनभने यो यति सुन्दर र अपमानजनक देखिन्छ। यस बीचमा, फेसबुकले पृष्ठ ब्लकड्रेसन रोक्न गरेको छ जुन मैले घोषणा गरेको छु। सन्देश जुन म अब2बाट प्रकाशन गर्न सक्दिन अब मेरो पृष्ठको शीर्षमा रहेको छ (हेर्नुहोस् यहाँ)। यो, बारीमा, मार्टिन व्रिजल्याण्ड आफैले मात्र एक नियन्त्रण विरोध होइन कि प्रश्न उठाउँदछ। त्यो कसरी साँच्चै काम गर्दछ? म भन्न चाहन्छु: थोडा गहिरो खोल्नुहोस्।
यस सन्दर्भमा फिल्म सर्च्रेटहरू (ब्रूस विलिस अभिनीत) हेर्न हेर्न उपयोगी हुनेछ। यसमा तपाईं कसरी अभियोगका सृजनाकारहरू (रोबोट अवतारहरू जसमा अधिकांश समाजले त्यस चलचित्रमा बस्छ) एक उपन्यास नेताले पुरानो जीवविज्ञान व्यक्तिहरूलाई उपनगरहरूमा बस्छन्। ती वास्तविक व्यक्ति एक प्रकारको "मानव चिडियाघर" मा बस्छन्। यो चलचित्रले राम्रो तरिकाले देखाउँछ कि तपाईं कसरी यसको नेतृत्व गरेर विरोध नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ।
तर नियन्त्रित विपक्षीहरूको प्रयोग के हो? तिनीहरूले उनीहरूलाई चहचहाना वा फेसबुकबाट किन रोक्न सक्थे, उदाहरणका लागि? के तपाईं हेर्नुहुन्छ कि कति ध्यान केन्द्रित हुन्छ? तपाईले यसलाई वास्तवमा प्रयोग गर्नु पर्छ। जस्तै Wikileaks (जुलियन असान्ज) पनि एक नियन्त्रण विपक्षी साइट थियो जुन तपाईं कसरी गल्ती गरिएको छ भन्ने बारे जानकारी रिसाउन सक्नुहुनेछ (हेर्नुहोस यहाँ किन)। यहां सम्म कि केहि थोडा मर्ममिंग र सल्किंग संग तपाईं यसलाई उपयोग गरेको छ (त्वरित गति मा)। यो बस आवास को प्रक्रिया को गति को लागि कार्य गर्दछ। उपस्थितिको लागि, केहि सम्झौताहरू बनाइएका छन् र केहि मिडिया त्रासदी स्थापित गरिएको छ, जसले तपाईंलाई विश्वास गर्दछ कि जनतामा सबै सतावट मात्र उपयोगी र आवश्यक छ। बीचमा, भाप लोमोमोटिव मात्र उकालो छ। नियन्त्रित विरोध पनि अक्सर सुरक्षा नेटको रूपमा सेवा गर्दछ। पढ्नुहोस् यहाँ कसरी त्यो सुरक्षा नेट रणनीति काम गर्दछ।
"तर कसले मलाई बताउँछ कि तपाईं नियन्त्रण नियन्त्रण मुक्त देश होइन"। यदि तपाईं आफैलाई यो प्रश्न सोध्नुहुन्छ, कृपया यसलाई एक राम्रो नज़र राख्नुहोस् र त्यसपछि नीदरल्याण्डमा कुन व्यक्ति हो कि कुन व्यक्तिले विवरणमा नियन्त्रण गरिएको नियन्त्रणको खेललाई सम्बोधन गर्छ, विशेष गरी नाम राख्दछ र कुन व्यक्तिले पनि जडान गर्दछ; जस्तै कि FvD frontman Thierry Baudet र क्लाइन्न्डेल संस्थान र एलेक्स जोन्स र मीका काटा बीचको राष्ट्रिय नीतिको लागि परिषद (सीएनपी)। तपाईलाई यो राम्रो तरिकाले अध्ययन गर्न समस्या लिनु पर्छ। म पनि तपाईंलाई कसरी देखाउनेछु कि म कसरी एक्लो निशुल्क थियो (प्राय: जसमा 2012 मा सुरू भएको) लेखक जो शक्ति र उनको टोली को मोहम्मद द्वारा आक्रमण गरियो। पछि जो पछि एक महिला मा परिवर्तित भएको छ र अब एक मनोचिकित्सा नर्सिंग कोर्स को अनुसरण गर्दछ। तपाई पढ्नुहुन्छ यो लेख र टिप्पणीहरू मात्र ठीक छ। वास्तवमा, यो सबै क्रिस्टल स्पष्ट छ, प्रदान गर्नुभएको छ तपाईले यसलाई साँच्चै यसको गम्भीरतापूर्वक जाँच गर्नुहोला।
मिसाटका ती तीज आक्रमणहरू जुनसुकै ठाउँमा पुग्छन्, यो सामान्य घटना जस्तो देखिन्छ र उनीहरूको विश्वसनीयता बढावा दिन जान्छ। तर यदि तपाईं गहिरो गहिरो देख्नुहुन्छ भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि यी आक्रमणहरू शान भन्दा बढी छैनन् र यस्तो मिका कटले होटलमा होटलमा फ्रान्समा ईश्वरको जस्तै आशा गर्दछ; "डेमलिन दस्तक" र पेडो-माफियाका लागि "दौडमा" भनिन्छ। कसले तिर्नेछ? एकपटक एकपटक एकदमै चकित भएपछि, यो स्पिन जारी रहनु पर्छ, अन्यथा पूरा झूटो कारखाना अलग हुनेछ। "हो, तर तपाईं पनि आक्रमण गरिरहनु भएको छ, र किन यो एक शर्म छैन?"किनकि म मौलिक हो र यति नै आक्रमण गरिसकेको छ कि यसले शाब्दिक रूपले मलाई सबै चीजको खर्च गरेको छ र म होटल कोठा बाट होटेल कोठा बाट हप्प छैन। शम हमलाहरू र मौलिक-हानिकारक आक्रमणहरू बीचको भिन्नता छ। कहिलेकाहीँ किट पहिले मेरो द्वारा अवस्थित थियो जब मैले केही वर्ष पहिले देखेको थिएँ जसलाई उनले भुक्तान गरे; एक अपराधी विच्छेदनवादी व्यक्तिले जसलाई वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू (जैक अरोमोफफ) निकाल्न युवा बालबालिकासँग यौन रेकर्डिङ प्रयोग गर्दथे। अनि त्यस्तो व्यक्तिले राजनीतिक डेमिङ्क पेडो-माफियालाई लड्न सक्दछ? उपेक्षाहरू धोका दिन्छन्।
"हाँ, तर ग्याडभरडेमा, यो सबै यति नकारात्मक छ!" दुर्भाग्यवश, वास्तविकता वास्तविकता बार्सिलोना मा लिभरपूलको जीत भन्दा कम वा अज्याक्सले च्याम्पियन लीग फाइनलको पहुँच पुग्छ। मिडिया र वैकल्पिक मिडियाले दृश्यहरूलाई नियन्त्रणमा राखेको शक्ति ब्लकद्वारा जुन एक निश्चित दिशामा जनतालाई डोऱ्याउन चाहन्छ। यदि तपाईं आफ्ना कंधेहरू सुर्नुहुन्छ र सोच्नुहुन्छ "यो मेरो समय" वा "मेरो पछि बाढी", एक अधिक र अधिक कुलत्ववादी शासनले थप जान्छ जुन तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा अनुभवी यदि जेल मात्र अनुभव गर्नुहुनेछ। छुन्छ (वा तपाईंका बच्चाहरु)। त्यसपछि दुर्भाग्यवश धेरै ढिलो हुन्छ।
त्यसैले यो राजनीतिज्ञ र अगाडिको मिडियामा छोडेर बरु म्याग्दी वा वैकल्पिक मिडियामा बदल्न को लागी सडकमा सकारात्मक योगदान गर्न महत्वपूर्ण छ। यूरो-संदिग्ध मतदान समाजमा विरोधीहरूको पोषण गर्ने योगदान भन्दा बढी केही छैन। यो (सुरक्षा नेट) नेताओं पछि चलाउन काम गर्दैन। हामिलिनको यी पिती पिपर राम्रो प्रशिक्षित छन् र धेरै छन्। मैले हालै लेखे यो लेख तपाई आफैले के गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि फेरि पढ्नुहोस्। यो बाह्र देखि 1 मिनेट हो। तपाईंको छोराछोरीलाई तपाइँले पछि सोध्नुभयो भने तपाईलाई दिइने जवाफ हो: "आमा या पिताजी, तपाईंले यो रोक्न के गर्नुभयो?"
थियरी Baudet फेरि नेदरल्यान्ड्स ठूलो हुनेछ! वास्तवमा!
ट्याग: प्रतिबन्ध, BART, फेसबुक, विशेष, रोकिन्छ, नियन्त्रित, कुनै शैली छैन, घृणित, infowars, कैट, मार्टिन, Micha, निजमान, विरोध, पृष्ठ, प्रोफाइल, rat catcher, twitter, हटाइयो, Vrijand
8 मई 2019 मा 13: 00
आलेखमा अन्तिम प्रश्न वा सकारात्मक योगदान के हो?
केही मानिसहरू जनसंख्यामा कान दिने छनौट गर्छन्। म मेग्लोमेनीकस मीडिया संरचना जस्ता टेलिग्राफ, एनपीओ, मूलतया सबै (वैकल्पिक) मिडियाको बारेमा कुरा गर्दैछु जसले कानूनी रूपमा हाम्रो आँखामा कानूनको प्रचार प्रसार गर्न सक्छ, शब्द हावाको स्वतन्त्रता, जबसम्म तपाईं उनीहरूको साथमा मार्टिनभ्रिजल्याण्डको रूपमा सह-लेखन गर्न इन्कार गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईं बाहिर हुनुहुन्छ र तपाईं निन्दा गर्नुहुन्छ
अर्को राम्रो उदाहरण:
मैले हालै कसैलाई बिलबोर्ड पोष्टहरू प्रतिस्थापित गरे।
सार्वजनिक स्ट्रीट फ्रेमहरू, तपाइँ तिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ, जसमा घोषणा गरिएको छ: ठूलो सफलताको कारण त्यहाँ सैनिकको ओररको प्रदर्शन हो वा नग्न चुम्बन पुरुषहरूको पोस्टर।
मैले सोधे कि पोस्टरहरूलाई प्रतिस्थापित गर्ने व्यक्तिलाई सोधें: "के तपाईं कहिलेकाहीं खडा हुनुहुन्न! तपाईलाई पछाडी राख्नु भएको बिलबोर्ड पछि? र तपाईंलाई थाहा छ कि सबै पासपोर्टहरूले यसलाई हेर्छ?
"उनले होशियार जवाफ दिए! र त्यसपछि मैले सोधें, "तिमी के गर्दैछौ?" उनी भन्छिन्: केही छैन: मलाई पोस्टरको तस्वीर लिनु र मेरो मालिकलाई देखाउनु।
ओह म भन्छु कि कुन किसिमको पोस्टर तपाईं लटाउन चाहानुहुन्छ? राम्रो नग्न महिलाहरु र पुरुषहरु र वाइल्डर्स देखि प्रचार।
तर उनी भन्छिन् कि एक सहयोगीले एकपटक अस्वीकार गरेका छन् र मुस्लिम हो र निकालिएको छ।
तर तिनी भन्छिन्: "मलाई मेरो भाडा तिर्नुपर्छ, त्यसैले": मलाई सबै चीजलाई फाँट गर्नु पर्दछ जुन मलाई सोध्छ कि सडकमा लटकाउन।
त्यसैले जब जानबूझ गरेर आफ्नो इच्छाको विरुद्ध केहि गर्दै, उसले यो गर्छ ... पैसाको लागि
म एक पल को लागि भने यदि तपाईं यसलाई लटकाउन र अर्को एक पनि मनाउन मनाउनुहुन्छ, त्यसपछि अब पोस्टर ह्याङ्गर्सहरू छैनन् र त्यसपछि तिनीहरूले सोच सुरु गर्न, हाँ, उनले भने। म यसलाई मेरो सहकर्मीहरूमा पठाउँछु
8 मई 2019 मा 14: 08
नहीं, तपाईं निश्चित रूप मा मार्टिन छैन, म यसको 100% लाई आश्वस्त छु। आम्दानी आन्दोलनको क्रममा तपाईंले खेललाई राम्ररी अगाडि बढाउनुभयो। गिज संग एक नियन्त्रित आंदोलन, र कसरि इरादा सामान्य जनता को आंदोलन को व्याख्या कसरि थियो। ती सबै वर्षहरू मैले कहिल्यै पनि डबल एजेन्डामा खिच्न सकिनँ, जो पुरानो क्याम्प र काटीसँगको सम्बन्ध थियो। धेरै झूटा रिपोर्टहरू जुन पागल लेबलको साथको पिटको सार्वजनिक वरपर हिडिरहेका छन्, र पुरानो वेनप्याम्प सार्वजनिक रूपमा एलियन्सको साथ हिंडिरहेको छ, त्यसैले मानिसहरूले नियमित विश्वास र सञ्चार माध्यममा आफ्नो भरोसा राख्न जारी राख्छन्। सबै बाह्य हमलाहरु जुन साजिश विचारधाराहरु, एल्यू टोपीहरूको नेतृत्व गर्दछ, ओल्डेनक्याम्प वा काटले यूएफओहरूलाई कहिल्यै व्याख्या र बचाएको थिएन। उनीहरु साढे बर्ष को लागि त्यहि खेल खेल्दैछन्, जो अन्ततः अगाडी अझै पनि अधिक जागरूकता (इन्फिनिटी प्रतीक अल्फा / ओमेगागा) को नेतृत्व गर्दैन।
« उपेक्षित बच्चाहरू जन्डमम फेरि एक समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान कथा?
अर्को स्तर सुरक्षा नेट: कैफे वेल्स्चेमरज (पेटिङ्गको ढाँचा) मार्फत पैट्रिक सावेल साजिश कोर्स »
कुल भ्रमण: 12.333.957